Ciidamada Difaaca Puntland oo Guulo ka sheegtay weerar ay ku qaadeen maleeshiyaad Al-Shabaab ah[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Ciidamada Difaaca Puntland oo Guulo ka sheegtay weerar ay ku qaadeen maleeshiyaad Al-Shabaab ah[Sawirro]
BOOSAASO – Ciidamada Ammaanka Puntland ee PSF ayaa sheegay in ay weerar ku qaadeen saldhigyo maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku lahaayeen Buuraleyda Calmadow halkaasoo ay ku dileen 18-Al-Shabaab ah.
Ciidamada PSF ee Puntland ayaa howlgalkaas ku burburiyey saldhigyadii ay ku lahaayeen deegaankaas Calamadow.
Qoraal kasoo baxay Ciidamada PSF ayey ku sheegeen in ay burburiyeen talisyo Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanada Madarshoon,Diindifle,biyo madow iyo Mariidle ee buuraha Cal-madow.
Ciidanka Amniga Puntland (PSF) oo afartii maalmood ee la soo dhaafay ka waday Buuraha Cal madow hawlgalo sifayn ah oo ka dhan ah ururka argagixisada Al Shabaab ee ku dhuumalaysta Buuraha Cal Madow, Puntland, ayaa gaaray guulo muhiim ah, kadib markii ay burburiyeen talisyo ururka Al Shabaab ku lahaayeen aaggaga Madarshoon,Diindigle,Biyo Madow iyo Mariidle ee Buuraha Cal Madow” ayaa lagu yiri qoraalka ay ciidamada PSFta.
Bartilmaameedka hawlgalkan ciidanka #PSF ay fuliyeen ayaa ahaa goobo ay ururka argagixisada Al Shabaab kaga sugnaayeen Buuraha Cal Madow, waxayna ciidanka PSF weerarkan ku dileen 18 ka tirsan ururka argagixisada Al Shabaab oo ay ku jireen saraakiil; sidoo kale ciidanku waxay hawlgalkaas ku gubeen kaydadkii labadaas saldhig oo ay yaaleen raashin,hub,rasaas iyo daawooyin”
Ciidamada ayaa sheegay in ay sii-wadayaan howlgalada lagaga sifeynayo maleeshiyaadka Al-Shabaab buuraleyda Cal-madow iyadoona ay hadda ciidamadu gaareen deegaanadii ugu dambeeyey ee Al-Shabaab ku lahayd saldhigyada.
Maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ee ka howgala buuraha Calmadow ayaa 8dii bishii June waxa ay weerar gaadmo ah ku qaadeen saldhiyo militari oo dowladda Puntland ku lahayd deegaanka Af-urur halkaasoo ay ku dileen 50 qof isugu jiray askar iyo dad shacab ah.